Hargeysa: Qallinjebinta Dufcaddii 13aad ee Machadka Luuqadaha MIAMI College | Berberanews.com
Home WARARKA Hargeysa: Qallinjebinta Dufcaddii 13aad ee Machadka Luuqadaha MIAMI College
Hargeysa: Qallinjebinta Dufcaddii 13aad ee Machadka Luuqadaha MIAMI College
Hargeysa-(Berberanews)-Dufcaddii 13aad ee ka qallinjebisa Machadka Luuqadaha ee Miami, ayaa maanta lagu qabtay Magaalada Hargeysa.
Madaxda Xisbiyada Qaranka, Xildhibaano, siyaasiyiin, Maamulka Wasaaadda Waxbarashada, waalidiin iyo marti sharaf tiro badan, ayaa ka soo qaybhashay xafladda loo sameeyay qalinjebinta ardaydaas.
Maamulaha Miami College Cabdicasiis Qaasim Xuseen, ayaa ka hadlay aas-aaskii Kulliyadda, marxaladihii ay soo mareen iyo hiigsigooda fog. “Miami College waxaa la aas-aasay sannadkii 2008, illaa maanta waxaa nalagu yaqaannaa waa waxbarasho tayo leh. Waxaan ku bilownay tiro aad u kooban maantana waxaa dhigta sadex kun oo arday. 28341 qof baa ka qalinjebiyay Kulliyadda Miami College.”ayuu yidhi Maamulaha Miami College.
Guddoomiyaha Xisbiga Mucaaridka ah ee UCID Eng Faysal Cali Waraabe, oo isna halkaas ka hadlay, ayaa yidhi “Maalmaha aynu ugu qurux badanahay waa maalmaha aynu qallinjebinta samaynayno, halkana kuma arko wasiirradii, wasiirradu malaha Colegeka ayaanay afgaranayn ee jaamacad ugu qora.”
“Ardaydiinan maanta wax baratay ee waalidkood ku soo tabcay mustaqbal baad u baahantihiin, inaad shaqo heshaan baad u baahantihiin, inaad biyo heshaan, caafimaad heshaan, laydh heshaan baa u baahantihiin.” Ayu yidhi Faysal Cali Waraabe.
Guddoomiyaha Xisbiga Mucaaridka ah ee Waddani Xirsi Xaaji-cali Xasan, ayaa bogaadiyay ardayda, “Waxaan maanta hambalyo iyo bogaadin usoo jeedinayaa ardayda maanta halkan ka qallinjebisay, wakhtiga badan sugayay ee soo dedaalay ee waalidkood tacabka soo geliyay.
Waxaa kale oo iyaguna xafladda ka hadlay Guddoomiyaha Baanka Somaliland, Cabdikariin Axmed Mooge iui xubno kale oo dhammaantood dhiirigelin iyo dardaaran u diray ardayda.
cabdicasiis qaasim xuseen
hargeysa miami college
Previous articleAbbiy Ahmed oo qaaddacay waanwaantii Beesha Caalamka
Next articleSomaliland: Ganacsato iyo siyaasiyiin Kufsi geysta oo dhaqaale kaga baxsada sharciga